Musharax Jibriil oo Baydhabo Lagu Soo Dhaweeyay (SAWIRRO)
admin Sept. 29, 2016, 5:31 p.m. 132
Hal Qaran (Beydhabo) - Mushrax Madaxweyne, Mudane Jabriil Ibraahim Cabdulle, ayaa waxa uu maanta socdaal ku yimid magaala madaxda Gobalka Bay ee Baydhabo si uu kulamo ula qaato madaxda dowlad gobaleedka koofur Galbeed oo uu ugu horeeyo Madaxweyne Shariif Xassan Sheekh Aadan, uuna ula hadlo bulshada ku nool deegaanada koofur Galbeed.
Diyaaradda ay la socdeen Mushrax Jibriil iyo Wafdi ku wehliya socdaalka oo ka duushay Muqdisho ayaa waxa ay caga dhigatay garoonka diyaaradaha ee Shaatiguduud, halkaas oo ay ku sugayeen dadweyne fara badan iyo masuuliyiin ka socday dowlad gobaleedka oo ay kamid yihiin wasiirro iyo xildhibaanno waxa uuna uga mahad celiyay maamulka iyo dadweynaha sida ay usoo dhaweeyeen.
Musharax madaxweyne Jabriil Ibraahim Cabdulle, ayaa waxa uu ku sugnaan doonaa baydhabo maalmo, isaga oo shacabka kula hali doona meel fagaare ah.
Socdaalka maanta uu Jibriil kusoo gaaray Baydhabo ayaa waxa uu qeyb ka yahay socdaallo uu ku marayo dowlad gobaleedyada dalka ka jira si uu shacabka Soomaaliyeed u dhageesto.
Mudane Jabriil ayaa musharaxnimadiisa uga dhawaaqay 19/09/2016 xaflad ka dhacday Muqdisho oo ay kasoo qeyb galeen kumanaan Soomaali ah waxa uuna balan qaaday in uu wax badan ka qaban doono xaalada cakiran ee dalka hadii uu ku guuleesto madaxtinimada.